डिपिएल अक्सन शनिवार हुँदै, कति हुनेछ खेलाडीको मूल्य ? | KhelNepal
डिपिएल अक्सन शनिवार हुँदै, कति हुनेछ खेलाडीको मूल्य ?
काठमाडौँ-यही माघ २६ गते देखि फाल्गुन ११ गतेसम्म धनगढीमा आयोजना हुने धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएलको तेश्रो संस्करणको लागि खेलाडी अक्सन पुष २१ गते शनिवार काठमाडौँमा हुने भएको छ।
बुधबार डिपिएल आयोजक धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले प्रेस बिज्ञप्ति गर्दै अक्सनको मिति घोषणा गरेको हो। अक्सनको लागि २ सय ५ जना खेलाडीहरुले नाम दर्ता गराएको समेत एकेडेमीले बिज्ञप्तिमा बताएको छ।
डिपिएलमा एउटा टिमले १५ जना खेलाडीहरुलाई अनुबन्धित गर्नुपर्ने नियम रहेको छ। त्यसमध्ये एक जना ट्यालेन्ट हन्टबाट तथा २ जना बिदेशी खेलाडीहरु अनिवार्य समाबेश गर्नुपर्नेछ।
धनगढी प्रिमियर लिगमा ६ वटा सहरको प्रतिनिधित्व गर्ने टोलिहरु रहेका छन्। यो पटक सहभागी हुने टोलिहरुको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। गत संस्करण प्रतियोगिताको उपाधि सोमपाल कामि कप्तानीको धनगढी टिम चौराहाले जितेको थियो। यस अघि जस्तै ६ सहरको टोलिहरु सहभागी हुने प्रतियोगितामा कुल १९ खेल खेलिनेछन्।